China 3D Embossing Zvimwe Zvakasikwa Isina Mvura Hollow WPC Decking vagadziri uye vanotengesa | Lihua
3D Embossing Zvimwe Zvakasikwa Isina Mvura Hollow WPC Decking
Zvigadzirwa muridzi:3D WPC Kurongedza
Mutengo:$ 2.45 / M
Ruvara:Grey, Teak, Marasha, Chokoreti, Bhuruu, nezvimwe
Lead nguva:8-16 MAZUVA
3D Mabhuku eBraille WPC Decking
2.4m, 3.6m, kana yakagadzirirwa
Chivanze, Bindu, Paki
Yakagezwa uye Sanding
1.New teknolojia 3D embossing WPC yekunze kushongedza pasi, yekushongedza yekuwedzera. 3D embossing tekinoroji inyanzvi yekuveza. Pasi rega rega rakaenzana nechivezwa, uye hunyanzvi mamiriro uye dhijitari yekuona yakagadziridzwa zvakanyanya. Classical 3D embossing ndiko kusimudzira kukuru mumatanda-epurasitiki anoonekwa, ayo asingakwanise kungonyorwazve nemabhandi asi zvakare kutsigira matanho ekutanga kuhukura.
2.Tsika wpc rinoumbwa decking zviri nyore kurasikirwa nezviyo pamusoro, super embossed decking inoita zvirinani kupfuura chero zvakajairika zvinoumbwa huni, zvinowanzoitika uye zvinokwezva, zvirinyore kupera uye kukwenya kusagadzikana.
3.Lihua's super embossed WPC decking uve nezvakanakira zvechivanhu rinoumba decking , ichiri kuchengetwa: isina mvura, inopesana neUV, inodziya mamiriro ekunze, inorwisa ngura, kudzivirira tupukanana, kuchengetedza kwakaderera, hupenyu hwakareba hwebasa nezvimwe ... Uye akadzika emabhodhi akadzika anotaridzika uye anzwe zvakanyanya kunge huni hwepanyama nekuda kweiyo 3D embossing kurapwa kwe pamusoro.
Slip Resistance Yakaoma
EN 15534-1: 2014 Chikamu6.4.2 CEN / TS 15676: 2007 EN 15534-4: 2014 Chikamu 4.4
Yekureba nzira: Kureva 72, Min 70 Nongedzo yakatwasuka: Zvinoreva 79, Min 78
Kutedzemuka Nemishonga Wet
Yekureba nzira: Kureva 46, Min 44 Kutungamira kwakatwasuka: Zvinoreva 55, Min 53
Kudonha kuwanda kusagadzikana kusagadzikana
EN 15534-1: 2014 Chikamu7.1.2.1 EN 15534-4: 2014 Chikamu 4.5.1
Hapana chimwe chezvirevo chinokundikana nehurefu urefu≥
10mm kana kudzika kwekusara kwemukati≥0.5mm
Max.Crack kureba (mm): Hapana kutsemuka Max.Residual indenation (mm): 0.31
EN15534-1: 2014 AnnexA EN 15534-4: 2014 Chikamu 4.5.2
-F'max: Zvinoreva -3300N, Min≥3000N
-Kufungisisa pasi pemutoro we500N Mean≤2.0mm, Max≤2.5mm
Kukotama Simba: 27.4 MPa Modulus yekukwirisa: 3969 MPa Kunonyanyisa mutoro: Zvinoreva 3786N, Min 3540N Kusunungurwa pa500N: Zvinoreva: 0.86mm, Max: 0.99mm
EN 15534-1: 2014 Chikamu7.4.1 EN 15534-4: 2014 Chikamu 4.5.3
Inozivikanwa span iri mukushandisa: Mean ∆S≤10mm, Max ∆S≤13mm, Mean ∆Sr≤5mm
Span: 330mm, Zvinoreva ∆S 1.65mm, Max 1.S 1.72mm, Zvinoreva 1.Sr 1.27mm
Kuzvimba uye kutora mvura
EN 15534-1: 2014 Chikamu8.3.1 EN 15534-4: 2014 Chikamu 4.5.5
Kureva Kuzvimba: ≤4% muukobvu, -0.8%
muhupamhi, -0.4% pakureba Max kuzvimba: ≤5% muukobvu, -1.2% paupamhi, -0.6% pakureba Kunwa mvura: Zvinoreva: ≤7%, Max: ≤9%
Kureva Kuzvimba: 1.81% pakukora, 0.22% paupamhi, 0.36% pakureba Max Kuzvimba: 2.36% pakukora, 0.23% paupamhi, 0.44% pakureba Kunwa mvura: Zvinoreva: 4.32%, Max: 5.06%
EN 15534-1: 2014 Chikamu8.3.3 EN 15534-4: 2014 Chikamu 4.5.5
Kuiswa kwemvura pakurema: Mean≤7%, Max≤9%
Kunwa mvura muhuremu: Zvinoreva: 3.06%, Max: 3.34%
Linear yekupisa yekuwedzera yekuwedzera
EN 15534-1: 2014 Chikamu9.2 EN 15534-4: 2014 Chikamu 4.5.6 ISO 11359-2: 1999
Kuramba kune induction
EN 15534-1: 2014 Chikamu7.5 EN 15534-4: 2014 Chikamu 4.5.7
Brinell kuomarara: 79 MPa Chiyero cheelastic kupora: 65%
EN 15534-1: 2014 Chikamu9.3 EN 15534-4: 2014 Chikamu 4.5.7 EN 479: 2018
Kwayedza Kupisa: 100 ℃ Zvinoreva: 0.09%
Pashure: 3D Embossing Yemamiriro ekunze Kuramba Kwakaumbwa Hollow WPC Decking
Zvadaro: Tupukanana Kudzivirira Kunogadziriswazve Wood Mapurasitiki WPC Kuratidzira
Mabhodhi Kuisa Nongedzo
Nekuiswa kwakaringana uye kutarisirwa, zvigadzirwa zvehuni zvinovimbiswa kupa makore ekunze kwekunakidzwa kwekugara. Kuti uwane kumisikidza-kusinganetsi kusanganisa zvigadzirwa zvehuni:
-Taura makodhi ekuvaka emuno usati waiswa.
-Zvijairire nemirairo yekuisa.
-Ichokwadi kuti iwe une zvese zvishandiso uye zvinhu zvinodiwa-sezvakanyorwa mune rairo pepa.
Kuchengeta uye Kubata
-Usamborasa zvinhu zvehuni kana uchidzikisa.
-Store pane yakati sandara pamusoro uye kufukidza nezvinhu zvisina-translucent zvinhu.
-Kana uchitakura mapuranga emapuranga, takura pamucheto kuti utsigire zvirinani.
-Reffer kune yekuisa mirayiridzo yemamwe marongero pane chimwe chigadzirwa.
Kuchengeta uye Kubata Mirayiridzo Yekushongedza
Kuderedza kukwenya, matako, kucheka uye maburi, uye chengetedza runako rwekushongedza kwehuni. Tevedzera nhungamiro idzi:
-Usatsvedza madhiri kune mumwe nemumwe kana uchiafambisa. Paunenge uchivabvisa kubva kuchikamu, simudza iwo madheki uye woagadzika pasi.
-Usatsvedza maturusi kana kudhonza michina kuyambuka kumusoro kwedheki panguva yekuvaka.
-Kuchengeta pamusoro pemadhongi akasununguka kubva kumarara ekuvaka.Kutsvaga tsvina nemarara ekuvaka pamusoro penzvimbo dzematafura, izvo zvinoita kuti kukwenya kwepasi.
-Kana uchishanda nezvigadzirwa zvemuti kana chero zvekuvakisa, ive shuwa kupfeka zvakakodzera zvipfeko uye zvekuchengetedza michina.
-Zvese zvigadzirwa zvehuni, zvakajairika matanda anoshanda maturusi anogona kushandiswa, sekuenderana nemirairidzo yemugadziri.
-Scrap inogona kuraswa neyakajairika matombo ekuvaka.
-huni ine yakanakisa slip kuramba mvura kana kuoma.
-huni ine yakavakirwa-mukati yakavanda fastener system uye zviri nyore kuisa matanda clip.
-Shandisa yakashomeka # 8 x 2-1 / 2 ”yemhando yepamusoro yakavharwa, simbi isina waya kana sikuruu yekuumbiridza.
-Pre-kuchera inodiwa mukutonhora kwemamiriro ekunze uye kana iri mukati me1-1 / 2 "yekupera kwedekiki
-Usashandise glue kana caulk kusungira huni matanda kana kusimbisa mubatanidzwa pakati pematavi maviri uye chero imwe nzvimbo yepamusoro Izvi zvinodzivirira kuwedzera kwechisimba uye kudzvinyirira kwemapuranga uye kunokanganisa kubuda kwedhorobha.
Kufefetedza Kwakakodzera Kunodiwa
- Kuti udzikise hunyoro-kuvaka kubva pasi pechikepe, panofanirwa kuve neushoma
yegumi nembiri ”yakakwira isina kuvharika inoenderera yemuchadenga pamwe nemativi matatu echigadziro kubvumidza mweya wekuyambuka.
Izvi zvinofanirwa kuve zviri pazasi pezasi peiyo deck joist.
-Mune kumwe kunyorera kushomeka, kusanganisira madheki akavakirwa pakona yemukati, yekuwedzera kufefeterwa kunodikanwa panosangana dhizaini nechivakwa. Kukundikana kupa mweya wakaringana kunogona kukonzera kukundikana kwepamusoro pechikepe uye kuchashaisa garandi.
Lisen Wood decking Kuisirwa Mirayiridzo
Iwe unogona kusevha nguva yekuvaka uye mutengo nekugadzira dhizaini, kuronga kuronga bhajeti zvinhu zvinodiwa zvinoenderana nechinangwa dhizaini yechirongwa. Unogona kusarudza yako pachako zvinhu maererano nezvido zvako nemamwe marudzi huni sarudzo, kuvakwa kwehuni, michina yekuveza inogona kushandiswa kucheka, kucheka, kuchera uye zvichingodaro.
Kana iwe ukaisa iyo decking, chekutanga iwe unofanirwa kuita kuomesa pretreatment pasi, uye wozogadzirisa joist mune inoomesa ivhu. Tinokurudzira joist pitch ye 35-40cm. Nzvimbo yeJoist inogona zvakare kupfupiswa sekukumbirwa.
Funga nezve 3cm kupatsanurana kune chivakwa kana uchiisa iyo decking.
Iyo yekubatanidza kit yehuni decking isimbi yesimbi clip. Kuboora kunofanirwa kuve kudiki pane hupamhi hweiyo sikuru dhayamita ye3 / 4 kuitira kuti uwedzere kuzvibata-tambo screws kubata kwembambo.
Gogodza hunyoro pamwe nekushandisa sando yerabha panguva yekuvaka kuti uve nechokwadi chekuenzana gap uye yakanaka yekuvaka pamusoro.
Kureba kwesheet simbi kuchakanganiswa nekuda kwenzvimbo hombe yekuvaka. Isu tinokurudzira chikamu chikamu che5mm pakatarisana chikamu chemuchinjikwa.
1.You anogona batanidza paburi uye joist pamwe kuzvidzora-tapping sikuruu kana clip are zvisingawanikwi kubatana kwejoist uye decking.
Sarudza rinowirirana bhodhi kuva kumucheto bhodhi zvinoenderana saizi joist uye decking mushure mekupedza kuvaka.
Kuisirwa Maonde epurasitiki clip
Kana iwe ukaisa iyo decking, chekutanga iwe unofanirwa kuita kuomesa pretreatment pasi, uye wozogadzirisa joist mune inoomesa ivhu. Tinokurudzira joist pombi yeiyo 35-40 cm. Nzvimbo yeJoist inogona zvakare kupfupiswa sekukumbirwa.
Chimwe chibatanidzwa chehuni chekutema huni ipurasitiki simbi clip. Kuboora kunofanirwa kuve kudiki pane hupamhi hweiyo sikuru dhayamita ye3 / 4 kuitira kuti uwedzere kuzvibata-tambo screws kubata kwembambo.
Iwe unogona kubatanidza iyo groove uye joist neako-ekuzvirovera ekuzvigadzirira kana iwo ma clip asingawanikwe kune kubatana kwejoist uye decking.
Isa iyo yakasimba decking
Kana iwe ukaisa iyo decking, chekutanga iwe unofanirwa kuita kuomesa pretreatment pasi, uye wozogadzirisa joist mune inoomesa ivhu. Tinokurudzira joist pombi yeiyo 35-40cm. Nzvimbo yeJoist inogona zvakare kupfupiswa sekukumbirwa.
Funga nezve 3cm kupatsanura kuenda kuchivako kana uchiisa iyo yakasimba decking Isa iyo yakasimba decking nezvinoonekwa zvipikiri uye isa mbambo 2cm kumucheto.
Mubvunzo: Unovandudza zvigadzirwa zvako kwenguva yakareba sei?
Mubvunzo: Ndeipi dhizaini yekugadzirwa kwako kwechigadzirwa? Ndezvipi zvakanakira?
Mubvunzo: Ndeapi mutsauko wezvigadzirwa zvako pakati pevezera rako?
Mubvunzo: Ndivanaani vako veR & D vashandi? Ndezvipi zvinodiwa?
Mubvunzo: Chii chinonzi chigadzirwa chako R & D zano?
Mubvunzo: Ndeapi magadzirirwo emagetsi ezvigadzirwa zvako? Kana zvirizvo, ndeapi iwo chaiwo?
Mubvunzo: Ndechipi chitupa chawakapasa?
Q: Ndeapi vatengi iwe iwe wakapfuura iyo fekitori yekuongorora?
Mubvunzo: Chii chako chekutenga sisitimu?
3D Mabhuku eBraille Decking flooring
Mabhuku eBraille WPC decking
Super Rakafukidzwa Hollow decking
Isina mvura WPC decking
3D nekusimbisa, nebefu Mamiriro ekunze Nemishonga chinoumba Hollo ...
3D Deep Mabhuku eBraille Waterproof rinoumba WPC Hollo ...
Kunze Kwakadzika Embossed Wood Yakagadzirwa Yakasimba Dhiketi
Outdoor Wood Deep Zviyo Mabhuku eBraille Waterproof WPC ...
UV Nemishonga Deep Mabhuku eBraille Solid WPC Decking E ...
WPC rinoumba decking, huni mapurasitiki ematongerwo decking, Kunze WPC decking, WPC yekunze decking, WPC decking uriri, WPC uriri,